प्रधानमन्त्रीसँग महानायक हमालसहित काे काे जादैं छन भारत भ्रमणमा ? – Everest Dainik – News from Nepal
प्रधानमन्त्रीसँग महानायक हमालसहित काे काे जादैं छन भारत भ्रमणमा ?
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा अभिनेता राजेश हमाल पनि सामेल हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा मन्त्री, सांसद, सरकारी कर्मचारीका अलावा केही कलाकारहरु पनि रहने भएका छन् ।
कलाकार मध्ये राजेश हमाल त्यो टोलीमा रहने बताइएको छ । नयाँ दिल्लीमा रहादा प्रधानमन्त्रीको बलिउडका प्रतिष्ठित कलाकारसँग भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सोही कार्यक्रमलाई मध्येनजर गर्दै अभिनेता हमाल र अन्य कलाकारलाई पनि भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार प्रम ओलीले भेट गर्ने भारतीय कलाकारहरुको अन्तिम टुंगो भने आज सााझसम्म लाग्नेछ । गत साता राजधानीमा सम्पन्न फान अवार्ड उद्धघाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भारत भ्रमणमा कलाकारलाई पनि समावेश गर्ने बताएका थिए ।
ट्याग्स: pm india visit, rajesh hamal
मौसम पूर्वानुमानः उपत्यकाको तापक्रम आज २१ डिग्री सेल्सियस पुग्ने
पूर्वसभामुख महरा विरुद्धको मुद्दाको फैसला आज
बँदेल अब हानिकारक सूचीमा, किसानले मार्न पाउने!
विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलका हत्या आरोपित ८ प्रहरी फिर्ता
१० प्रतिशत नाघ्यो खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि
प्रहरीमा राजीनामा दिँदा श्रीमतीको सहभागिता अनिवार्य
आज सोमबार तपाइका लागि कस्तो? पढौं राशिफल